Mahajanga Tovolahy 20 taona nanolana zaza 9 taona
Tovolahy iray 20 taona no tratra nanolana zazavavy kely vao 9 taona monja tany Tsararano ambony distrikan’i Mahajanga ny sabotsy teo.
Norahonan’ity tsy mataho-tody ity ho faty ilay zazavavy kely 9 rehefa hitany tamin’ny toerana mangina feno fasana ka tsy sahy nigika. Nanamparan’ity farany ny filan-dratsiny araka izany ilay tsy manan-tsiny ka tany amin’ny fitombenan’ilay zaza no nanaovany izany. Nanam-bitana anefa ilay zaza ka nisy nahita ihany saingy tafatsoaka ilay mpanao ratsy. Nentina haingana tany amin’ny mpitsabo ilay zaza noho izany raha ireto nanatri-maso kosa no nijoro vavolombelona sy nanamarina fa voaholana ilay zaza. Tany Marovoay moa ilay tsy mataho-tody no tratra raha omaly kosa no niakatra fampanoavana. Inoana araka izany fa havesatra tokoa ny sazy hiandry azy.